သက်ဝေ: လှသထက် လှမယ်ဆိုရင်
Posted by သက်ဝေ at 12:50 PM
ZT January 20, 2011 at 1:11 PM
i-Gallop ဝယ်ထားပြီး ဆော့ပါလား အစ်မသက်ဝေ။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ :D
sonata-cantata January 20, 2011 at 1:21 PM
♫ စားမှာပဲ ၀ါးမှာပဲ ငါ့ကိုလာ မတားနဲ့ ♪♪♪
ဖြူ January 20, 2011 at 1:29 PM
သက်ဝေက သူ့ကိုသူ ၀နေတယ်ဆိုပါလား...
မဟုတ်တာတွေ မပြောရဘူးနော် ဒေါ်သက်ဝေ
Hmoo January 20, 2011 at 1:51 PM
မြူးမြူး January 20, 2011 at 1:56 PM
၀ိတ်ချခြင်းကို အားပေးပါသည်.. လေ့ကျင့်ခန်းလေးပါလုပ်ပေးမမ.. ညီမလဲ အစားလျှော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နဲ့ တော်တော်ဟုတ်လာပြီ..း)
rose of sharon January 20, 2011 at 1:56 PM
ကိုယ့်ကို ကိုယ်ကျေနပ်နေဘို့ဘဲ လိုတယ်... ဟုတ်တယ်နော်... မှန်မကြည့်ဘဲ ငါလှတယ်လို့ သတ်မှတ်လိုက်မယ်.. :P
Ko Boyz January 20, 2011 at 2:07 PM
ဗိုက်ပူတာ ကယ်လိုရီများတာနဲ့ ဆိုင်လား မသိ...
မဆိုင်ရင် ဒီပို့စ် ကျော်ဖတ်မယ်။
စကားမစပ် ဘီယာတစ်ဂျားမှာ ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက်ပါတယ်ဆိုတာ တွက်ပြပါ။ (၁၅မှတ်)
စာဖတ်သူ January 20, 2011 at 2:26 PM
သက်ဝေရဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်က ကော်မန့်တွေ ရယ်ရလို့ ကူးလာပေးသည်...
Aye Aye Sann - ကျေးဇူး မမ.. ဒီနေ့ ည Curry Fish Head သွားစားမလို့ဒီ post လေး ဖတ်ပြီး သွားမစားတော့ပါဘူး :((
Yuki Kaze - အမ.. ကမန်းကတမ်းဖတ်သွားတာတောင် သိစရာတွေ အများကြီးပါနေတယ်.. အိမ်က လူကို ပေးဖတ်ရမယ်.. သူကလေ ကယ်လိုရီများတာမှန်သမျှ အကုန်စားတယ်.. အာလူးကြော်ဆို အရမ်းစားတယ်.. computer သုံးရင်း အထုပ်ဘေးချပြီးကို စားတာ.. medical checkup လုပ်တိုင်း ၀ တာပဲ အပြောခံရတာလည်း ၀ိတ်လျော့ဖို့ မစဉ်းစားဘူး.. ကိုယ့်မှာတော့ ပိန်လို့ စိတ်ညစ်ရတယ်.. စောစောကလေးတင်ပဲ မရှင်လေး ပို့စ်မှာလည်း ၀တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး comment တစ်ခါ ရေးခဲ့ပြီးပြီ.. :D
Swe Zin Htun - ဒီနေ့ နေ့လည် ကြက်သားပြုတ်နဲ့ ဘရိုကိုလီပဲ စားပြီး စိတ်ဓာတ်ကျနေတာ။ ဒီပို့စ်လေးကြောင့် ပျော်သွားပြီ.. :D
Yuki Kaze မရေ..ပြောဖို့မေ့သွားလို့.. အမက အရမ်းမ၀ပါဘူး.. ကြည့်ကောင်းပါတယ်ဆို.. :)) Ms. Giant မဟုတ်ပါဘူး..
Peach Mon - ‎:) လျော့ဖို့ကြိုးစားရင်း လျော့ဖို့အားထုတ်ရင်း..ဒီမှာ ပို၀၀လာတယ်..အချစ်ရေ့..အချစ်ရေ့.. လျော့ဖို့ကြိုးစားမလွယ်ပါဘူး။
အခု ၀တော့ ပိန်ချင် ပြန်ပြီ
မောင်မျိုး January 20, 2011 at 3:20 PM
အရင်ကတော့ ၀လို့ လှတယ်ပဲ ရှိတယ်နော့် အခုကတော့ ပိန်မှ လှကြသလို ဒီမှာလည်း ရုံးက အစ်မတွေတစ်နေ့နေ့ ပိန်သွားလားပဲမေးနေကြတာပဲး) သူတွေများဖြင့် ပိန်ချင်လို့ အစားငတ်ခံရတယ် ကျနော်ကတော့ ဘာစားစားကို မ၀တာ စိတ်ညစ်တယ်း( ။
MrDBA January 20, 2011 at 3:27 PM
ဘီယာနှစ်လုံးနဲ့ ဘဲကင် တစ်ခြမ်းဆို ဘယ်လောက်များ ပါမလဲ သိချင်လိုက်တာ။ :)
TURN-ON-IDEAS January 20, 2011 at 3:44 PM
Healthy Life Style!!!
သိပ်ကောင်းတဲ့ အကျင့်လေးပဲ အစ်မသက်ဝေ...
အရင်က အဲဒိလို မစစ်ခဲ့ဘူး၊ အစ်မသက်ဝေ အရေးအသားက ဖတ်ရတာ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ ကိုယ်စားမယ့်အစားတွေကို လိုက်တွက်ကြည့်ချင်စိတ်ဖြစ်သွားပီ...
ဒီပို့စ်လေးရဲ့ ကုသိုလ်အကျိုးကြောင့် သတိတွေပိုပိုထားမိပြီး ဝနေတာလေးတွေရှိရင် လျော့သွားမှာတော့ အသေအချာပဲ...း))
သက်ဝေ January 20, 2011 at 3:49 PM
ပိုစ့်လေးကို လာဖတ်ကြသူများ မှတ်ချက်များအတွက် ကျေးဇူးပါ…
ဖဘက ကော်မန့်တွေ ကူးလာပေးတဲ့ စာဖတ်သူကိုလည်း ကျေးဇူးပါ…
ကိုဘွိုင်းဇ်မေးထားတာ ပိုစ့်ထဲမှာ ဖြေလိုက်ပါပြီ…
ကိုကိုဒီဘီ အတွက်ကတော့ ဒီမှာပါ…
ဘီယာတခွက် ၇၂ ကယ်လိုရီ
ဘဲကင်တကောင် (အကြမ်းချင်း) ၂၅၀၀ ကယ်လိုရီ
ကျန်တာတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆက်တွက်ပါလေ…း))
An Asian Tour Operator January 20, 2011 at 3:59 PM
ကျွန်တော့် ကျတော့ ရွှေနိုင်ငံ က လာတယ် ဆိုတာ ပြောစရာ မလို အောင် ပိန်ညောင်ညောင် ကလေးဖြစ်နေတယ် ခင်ည။ ဘယ်လို နည်းနဲ့ အမြန်ဆုံးဝ နိုင် မလဲ ဆိုတာလေး တဆိတ်လောက် ဖြေကြားပေးပါ လားခင် ညာ။
ချစ်ကြည်အေး January 20, 2011 at 4:13 PM
ဒါများ အလွယ်လေးပဲဟာ ကိုကြီးကို ရေခဲသေတ္တာမှာ ပါတ့်စ်ဝပ် ထည့်ခိုင်းထားလိုက်၊ သက်ဝေ ဆိုတာနဲ့ Access Denied ဖြစ်နေအောင် ခွိခွိ....:P
Thandar Lwin January 20, 2011 at 4:15 PM
မမေ၇.... ဖတ်ပြီးတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်တော်တော်စိတ်ညစ်သွားတယ်။ ပုံပျက်အောင်ကို ဝ ဝ လာလို့လေ ။ ခု ချမ၇သေးပေမဲ့ ချတော့ ချ၇မှာပါဘဲ ။ သတိပေးတဲ့ အဖိုးတန် ပို့စ်လေးအတွက် ကျေးဇူးပါ ။
Hmoo January 20, 2011 at 4:24 PM
ကျနော် တွေ့ တဲ့ အများစုမိန်းခလေး တွေကတော့ ဝလာတယ် နော် ပိန်သွားတယ် နဲ့ အဲဒါဘဲ ပြောနေကြတာဘဲ
ကလူသစ် January 20, 2011 at 7:51 PM
အမြန်ဆုံးနဲ့ အထိရောက်ဆုံး ပိန်ဆေးရှိတယ်။ အန်တီသက်ဝေ အမျိုးသားဖုံးနံပါတ်ကိုသာ ကလူသစ်ကိုပေးလိုက်။ သူ့ကို ပြောပြလိုက်မယ်။
ဇွန်မိုးစက် January 20, 2011 at 10:42 PM
ဇွန့်ကို အတည့်ထားပြီး ရေးသလား အောက်မေ့ရပါတယ်။ ဒီမှာ ၀ိတ်ချမယ်လို့ ကြွေးကြော်နေတဲ့သူကို။ :D
တစ်နေ့ကို ပေါင်ချိန်စက် အနည်းဆုံး တစ်ခါလောက် ချိန်ကြည့်တယ်။ တလောက ဒီဂျစ်တယ်လ်နဲ့ စက်လေးသဘောကျလို့ ၀ယ်ထားပြီးတော့ ကြုံရင်ကြုံသလို တက်ချိန်တာ။ အဟက်...
စားခါနီး ကယ်လိုရီတွက်ရမှာပျင်းလို့ ထီပေါက်ရင်တော့ Personal Trainer တစ်ယောက်ငှားပြီး ကိုယ်စားဖို့ ကယ်လိုရီကို တွက်ချက်ခိုင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းအတူလုပ်ခိုင်းဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့တာ ကြာလှပေါ့။ ထီမပေါက်သေးတော့လည်း အကောင်အထည်က မပေါ်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတာ အစ်မရေ။ :D
rose January 20, 2011 at 11:45 PM
အစ်မသက်ဝေ... ရို့စ်လည်း အစား စားရင် အထုတ်လေးတွေ အပေါ်မှာ ရေးထားတဲ့ ကယ်လိုရီ ဘယ်လောက် ဆိုတာလေးတွေ အမြဲ ဖတ်ဖြစ်တယ်။ သေချာ ဖတ်ပြီးမှ ရို့စ်က စားတာ ခစ် ခစ်း) မမက မ၀ပါဘူး။ အရပ်ရှည်ရှည်နဲ့ ကြည့်ကောင်းသားပဲ။
Ko Boyz January 21, 2011 at 1:21 AM
Thanks. Now I got good reason to drink beer than coffee. :-)
စာဖတ်သူ January 21, 2011 at 8:54 AM
Mie Nge - ကျမလည်း လျော့တော့လျော့နေတာဘဲ weekday ကျရင် လျော့သွားတဲ့ ပေါင်ချိန်လေးက weekend ကျရင်
(သူများအလှုတွေ သွားသွားစားဖြစ်လို့ ) ပြန်ပြန်တက်သွားတာ နဲ့ဘဲ ရှိတဲ့ပေါင်ချိန်နားတင် လည်လည်နေတာဆိုးတယ် ...း)
diet လုပ်ရတာလည်း အသီးအရွက်ဖိုးတွေနဲ့ ပိုက်ဆံပိုကုန်သလို နေ့တိုင်း တနေ့သုံးလေးခါ လောက် ၀ိတ်ချိန်ကြည့်ရတာလည်းအမောဘဲ (ပေါင်ချိန်စက်ကို ထမင်းစားခန်းထဲ ထားထားတယ်) ကိုယ့်ကိုယ်ကို နေ့တိုင်းပေါင်ချိန်ချိန်ကြည့်ခြင်းကလည်း diet လုပ်နေတဲ့အချိန် မဖြစ်မနေလုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်တခု ထင်တယ် မသက်ဝေ.. နို့မို့ဆို စားချင်တိုင်းစားလိုက်ပြီး ၀ိတ်တွေတက်လို့ တက်မှန်းမသိ ဖြစ်သွားရော အဲဒီကျတော့ အများကြီးတက်သွားပြီး လျော့ရပိုခက်သွားတယ်.. မသက်ဝေရဲ့ ပေါင်ချိန်စက်အကြောင်း မျှော်နေမယ် နော် .. ဒီပို့စ်လေးအတွက်ကျေးဇူးပါ ။
PAUK January 21, 2011 at 11:12 AM
Vista January 21, 2011 at 11:17 AM
အနော်တို့ ကျတော့လည်း စားထားတဲ့ ကယ်လိုရီတွေဘယ်များရောက်ကုန်သလဲဟင်။
high metabolism သမားမို့ လို့ ထင်ရဲ့ 
မိုးငွေ့...... January 21, 2011 at 11:48 AM
ညီမလေးက ၀လို့ နေလို့ထိုင်လို့မကောင်းတာနဲ့ ခုမနက်မနက်လမ်းပြန်ထလျှောက်နေတာ ....။ သွားပါပြီ ကော်ဖီဆို နို့ထည့်သောက်တတ်သေးတာ ..ပိန်တော့မှာပဲ...။ ဘီယာကတော့မတည့်လို့သောက်ဘူး...။
blueskyforest January 21, 2011 at 12:25 PM
ထည့်သလောက် ပုံမှန်ပြန်ထွက်နေရင် အခြေအနေမဆိုး ဘူးထင်ပါတယ်။ ပြန်မထုတ်နိုင်သူတွေ၊ ပြန်မထုတ် တတ်သူတွေ၊ ပြန်ထုတ်ဖို့ ပျင်းသူတွေတော့ ပွလာ ဖေါင်းလာမှာပေါ့။ ဒို့စက်ဘီးက လေမကြာခဏလျှော့ တတ်တော့ ဒီသဘောကို ဆင်ခြင်မိတာပါ။ အာရောဂျံနဲ့ ဆိုင် မဆိုင် မသိပါ။
Hmoo January 21, 2011 at 3:46 PM
မောင်လေး January 21, 2011 at 9:40 PM
ကော်ကော်လျော့ပြီး ဘီဘီ ပိုသောက်တော့မယ်.....:)
rachel January 24, 2011 at 2:13 AM
အသက်ကြီးလာတော့ အဆီတွေကစုလာပြီး ၀ လာကြတာများတယ်။ တို့လျှော့နည်းကတော့ နဲနဲကြမ်းတယ်။ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်လုံးဝမစားသောလျှော့ချနည်း။ နောက် အားဆေးလဲစားပေးရတယ်။ ၂ပတ်အတွင်း ၃ကေဂျီကျော်ကျပါတယ်။ ၀ိတ်တက်လာတိုင်း အဲဒီနည်းနဲ့ပြန်ချရတယ်။
rachel January 24, 2011 at 2:14 AM
အပေါ်က ကွန့်မန့်က TTSweet ပါရှန့် ... သမီးအကောင့်ဝင်ထားလို့ မွှားသွားတယ်း)
First I've middle east problem,then upper back....then around thigh.Finally,I labeled myself"I'm TAW LAY WA WIN"now.Living in land of cheese n chocolate......Hoooo....it's difficult to count the calorie(just as excuse)....:(
ရွှေရတုမှတ်တမ်း January 24, 2011 at 11:28 PM
တကထဲ..စားချင်တာစားဖို့အရေး ကယ်လိုရီကြည့်နေရတာနဲ့..လူလဲ အီသီယိုပီးယားရောက်တော့မယ်..
If we can not control, we could become like Michelin Tyre advertisement. :P
ညီမလေး January 27, 2011 at 8:02 AM
မီးမီးလဲ ကျသွားတယ် .. ဝိတ်တော့မဟုတ်ဘူးးးးး စိတ် ..ဟဟဟဟားးးးး ဒါပေမဲ့ သေချာလဲ ချမယ်လို့ လုပ်ကိုမလုပ်ဖူးးးးး မစားရတာလောက်စိတ်ဆင်းရဲစရာကောင်းတာ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ မမသက်ဝေရယ် ..... ။ အဲ့တော့.....ချမရတဲ့ အဆုံး ဝတာ စိတ်ချမ်းသာတယ် စားနိူင်တယ်ဆိုတဲ့ သင်္ကေတပဲလို့ ပျော်ပျော်ပဲတွေးယူလိုက်တယ် ဟိဟိ
သဒ္ဓါလှိုင်း January 28, 2011 at 5:41 PM
လရိပ်အိမ် February 6, 2011 at 9:03 PM
ကျွန်တော်လဲ ဝိတ်လျှော့နေပါတယ်။ ဆာရင်တော့ စားတယ်ဗျာ